Sidee Waxaad ka heli kartaa Internet Live365 Si fudud
> Resource > Download > Sidee loo Diiwaan Live365 Radio u offline Radidiyaha
Inkasta oo aad ku raaxaysato hoorto music on Live365, adeeg internet oo lacag la'aan ah raadiyaha, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka badan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad jeceshahay in uu ciyaaro music ku saabsan qalabka la qaadi karo marka la xiriira internet-ka aan la heli karin. Ma heshay downloader music ah? Waxaa kuu wanaagsan. Laakiin dhibaatadu waxay tahay in aad downloader music noqon karaa mid aan macquul u duuban music Live365 halka taariikhqorihii music ah xaqiiqo ah u samayn karaa. The Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio waa taariikhqorihii weyn music in in ay ku diiwaan music si toos ah uga soo kaarka codka on your computer. Taas macnaheedu ma jiri doonaan khasaaraha tayada MP3 files aad ugu dambeyntii u hesho. Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Bal aan ka soo hubi hoos ku qoran.
1 Ku rakib this taariikhqorihii Live365
Download taariikhqorihii music this si loo soo dajiyo on your computer. Waxaa jira laba nooc halka waa in aad soo qaado mid sax ah si aad u computer. Oo waxaannu diiradda saari doonaa version Windows tan iyo labadii shaqeeyaan si la mid ah.
2 radio Record Live365
Fur barnaamijka dib markii la rakibey oo ka heli a Record button ee bidixda xagga kore. Riix badhanka si ay u helaan diyaar ka dibna sii qulquli music on Live365. Sida ugu dhakhsaha badan music waxay ka bilaabantaa, barnaamijka bilaabi doonaan inay u Qoraynaa.
Waad haysan kartaa ciyaaro music iyo tan taariikhqorihii Live365 qori heesaha oo dhan, oo waxay u kala galay MP3 files kala duwan. Waxa ugu muhiimsan in ay maanka ku waa in xiriir ah internet deggan.
3 Bedelka music lagu duubay si Lugood
Ka dib markii heesaha oo ay diiwaangashan yihiin, iyaga doortaan iyo riix Add Lugood in badhanka hoose. Markaas heesaha oo loo wareejin doonaa Lugood iyo bandhigay playlist SAR ah. Laga soo bilaabo Lugood, aad u hagaagsan kartaa music in aad iPod, iPad iyo wax ka badan.
Fiiro gaar ah: Waxaad xaq u riixi kartaa heesta dooro Open galka si ay u helaan songs ee fayl deegaanka.
Waxaa jira dhowr ah muuqaalada gunno ah oo taariikhqorihii music this.
Samee ringtones: muujiyo hees iyo riix Ring icon dhexe. Markaas bitmap ah ku dhaliyay doonaa hoose, kaas oo aad dooran kartaa qayb ka mid ah si loo badbaadiyo sida MP3 file ama file M4R in lagu shubaa telefoonada aad. M4R si gaar ah waxaa loogu talagalay iPhone iyo MP3 wixii telefoonada kale.
Edit macluumaad song: taariikhqorihii music this si toos ah ka heli kartaa macluumaad u heesaha. Laakiin haddii aad rabto in aad ku darto oo aad alaabtoodii, xaq guji heesta dooro View Detail. Markaas buuxi duurka tafatirka ee khaanadda saxda ah.
Weli yaabeen in taariikhqorihii waxay u shaqaysaa? Sida ugu fiican si uu u siiyo isku day ah oo aad u jeclaan doonaa.
Sidee loo Diiwaan Pandora in Lugood
Top 50 Isladooda Goobaha durdurka Isladooda Video fudayd